Previous Article Ọdụ Ụgbọelu Sam Mbakwe na Owerri Agbaala Ọkụ
Next Article DANA Air amalitego imekwa njem ozo na Nigeria
Gọọmenti ala Naịjiriịa ekwuona na ya na-agba mbọ ịrụtọpụ ọrụ niile ya ji n’aka ugbu a maka ịhazigharị ngalaba njem ụgbọelu. Onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu, Osita Chidoka, gwara ndị nta akụkọ na ngalaba njem ụgbọelu na-ahọrọzi ọlụ ndị kachasị mkpa n’ime ọlụ niile dịịrị ya.
Gọọmenti ala Naịjiriịa ekwuona na ya na-agba mbọ ịrụtọpụ ọrụ niile ya ji n’aka ugbu a maka ịhazigharị ngalaba njem ụgbọelu. Onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu, Osita Chidoka, gwara ndị nta akụkọ na ngalaba njem ụgbọelu na-ahọrọzi ọlụ ndị kachasị mkpa n’ime ọlụ niile dịịrị ya. Nke a bụ maka n’ego mmawapụta na-abịa na ngalaba ahụ gbadara agbada kemgbe ọnụ ego mmanụ akụ chi nyere dara.
Chidoka kpọrọ ndị isi ọlụ, ndị ọ bụ ọlụ ha ịkenye ọlụ ngo, ka ha tinye anya n’ọlụ ndị kachasị mkpa, tụmadị ọlụ ndị ahụ a na-akwadozi ịrụtọpụ arụtọpụ.
Chidoka kwụrụ n’ọ bụ ịhe nwute na gọọmenti etinyeghị anya na ngalaba ahụ kemgbe afọ ole n’ole. O kwuru n’ọ ga-ewe ịhe ruru ijeri naịra 50 maka ịhazigharị ngalaba ahụ site ugbu a ruo afọ 28 na-abịa abịa.